Victoria House Resort & Spa Belize: Getaway Holiday Thanksgiving Ultimate
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hoteelada & Dalxiisyada » Victoria House Resort & Spa Belize: Getaway Holiday Thanksgiving Ultimate
Belize Breaking News • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • Shirarka • News • jiga • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Victoria House Resort & Spa, Belize, oo ah goob lagu abaalmariyo xeebta ku taal ee ugu weyn jasiiradaha Belizean, Ambergris Caye, waxay ku faantaa inay bixiso waxyaabaha lagama maarmaanka u ah sida ugu habboon ee 2021 Thanksgiving. Marka lagu daro meelo kala duwan oo si fakar ah loo nashqadeeyay, Victoria House Resort & Spa waxay soo bandhigtaa nashaadyo iyo tacaburyo, daawaynta nasashada, iyo mahadhaynta khaaska ah ee jannada dhexdeeda ah, cunto saddex-koorso ah oo heersare ah.
Martidu waxay ku raaxaysan karaan iid Thanksgiving ah oo cunto-cunayaashu ay ku abuureen dhadhan dayrta ugu macaan.
Socdaalayaashu waxay sugi karaan inay sahamiyaan jasiiradaha kala duwan ee tacaburrada ee jawiga quruxda badan ee Belize ee November.
Ambergris Caye, heerkulku waa celcelis ahaan 75°F, taas oo ka dhigaysa goobta cimilada kuleylaha ah door sare oo loogu talagalay socotada ka ilaalinaya buluugyada jiilaalka.
"Miisaanka saaxiibtinimo ee qoyskayadu waa ikhtiyaar aad u wanaagsan qof kasta oo raadinaya goob Thanksgiving-ka la'aan ah sanadkan," ayuu yidhi. Victoria House Resort & Spa Maareeyaha Guud, Janet Woollam. "Marka laga soo tago ku raaxaysiga iidda Thanksgiving ee khubaradeenu ay ku abuureen dhadhanka dayrta ee ugu macaan, dadka safarka ah waxay sugi karaan inay sahamiyaan jasiiradaha kala duwan ee tacaburrada cimilada quruxda badan ee Belize ee November."
Heerkulka bisha Nofeembar ee Ambergris Caye - mid ka mid ah jasiiradaha ugu quruxda badan Belize, oo ku yaal meel 35 mayl ka baxsan xeebta Belize City - waa celcelis ahaan 75 ° F, taas oo ka dhigaysa goobta cimilada diiran ee ugu sareysa ee safarka ka ilaalinaya buluugyada jiilaalka.
"Kadib muddo dheer oo ay gabaad ku jireen oo ay ka shaqaynayeen guriga, martida ayaa ku farxi doona inay ogaadaan meeshan qalaad, halkaas oo ay ku raaxaysan karaan maalmo qorrax leh iyo cirro buluug ah, oo ay ku nastaan ​​barkada dabaasha, snorkel, kalluunka, ama quusitaanka," ayuu yidhi Woollam. "Victoria House Resort & Spa waa meel gaar ah si aan u qoyno niyadda xilliga fasaxa, waxaana rajeyneynaa inaan martida ku soo dhaweyno hantida jasiiradda."
Iyada oo leh barkadaha aan dhamaadka lahayn, xeeb gaar ah, iyo dalxiis goobta ah iyo dukaanka Fantasea Dive ee PADI shahaado, Victoria House Resort & Spa waxay bixisaa dheelitirka saxda ah: jawi xasilloon oo ay martidu ku raaxaysan karaan wadarta nasashada iyo sidoo kale martigelin xiiso leh. qoyska oo dhan. Marka lagu daro waxqabadyada ay ka midka yihiin baaskiil wadida, kayaking, fuulista roodhida, snorkeling, iyo kalluumeysiga, martida waxay sahamin karaan macbadyada qadiimiga ah ee Mayan ee u dhow, waxay aadi karaan dahaarka dusha sare ee daanyeerka kaynta oo ay ku jiraan daanyeerka Black Howler ee quruxda badan, ku biir safarka kaynta, ama booqo Dhaxalka Adduunka Muraayad xeebeed waayo-aragnimo quusin aan caadi ahayn.
Guryaha heer caalami ee dalxiiska ayaa bixiya jawi ku habboon oo lagu nasto oo lagu nasto ka dib maalinta sahaminta, haddii martida ay doortaan tuulooyinka goonida ah ee leh barkadaha gaarka loo leeyahay ee loogu talagalay kooxaha yaryar iyo qoysaska, Casitas kulaylaha, Villas view badda, ama qolal si xarrago leh loo qurxiyey ee a dhismo laba dabaq ah oo qaab gumaysi ah. Victoria House Resort & Spa sidoo kale waxay ku faantaa inay muujiso a spa adeeg buuxa iyo xarunta jirdhiska iyo sidoo kale saddex xarumood oo cunto karis oo kala duwan munaasabad kasta.
Caan ku ah diyaarinta cunto badeed cusub oo tayo sare leh iyo suxuun maxalli ah, kooxda cunnada ee Victoria House Resort waxay diyaariyeen menu gaar ah oo loogu talagalay Thanksgiving, oo ka bilaabmaya laba ikhtiyaar oo koorsada koowaad ah: a salad pear leh fennel, walnuts, sabiib, iyo farmaajo buluug ah, ama kor u kaca maraq sinjibiil karooto oo leh caloosha doofaarka oo qallafsan, dabocase la dubay, iyo tufaax karamellaysan. Koorsada labaad, martida waxay yeelan doonaan ikhtiyaarka ah guri baasto laga sameeyey oo lagu daray ricotta-malab iyo xikmad leh oo lagu daray baradho baradho ah, fillet snapper cusub lagu diyaariyey dhir udgoon iyo maraqa yogurt qajaar ah oo tagan, ama naaska turkiga la dubay oo lagu daray digsi cagaar ah iyo rooti baradho macaan oo macaan leh oo farmaajo ari ah. Toffee dhegdheg leh oo lagu daray vanilj gelato iyo suugo karamell bourbon ah oo dareen leh ayaa soo koobaya cuntada fasaxa.
Laga heli karo 15-daqiiqo duulimaad rakaab ah oo ka imanaya Belize City, Victoria House Resort waxay fududaynaysaa in la qorsheeyo dabaal-dega nooc ka mid ah meel aad u qurux badan sanadkan.
Ku saabsan Fiktooriya House Resort & Spa
Waxay ku taal Belize oo ku taal Ambergris Caye, oo ah tan ugu weyn jasiiradaha Belizean, Victoria House waxay laba mayl koonfur ka xigtaa magaalada quruxda badan ee San Pedro. Dalxiiskani wuxuu bixiyaa dhadhamin xarrago cago-cad ah oo martida ku soo celinaysa in ka badan, oo leh 42 qolal marti ah oo u dhexeeya qaab laga soo bilaabo casitas saqafka saqafka ilaa hudheellada xeebta ee leh barkado gaar ah, qolal beero-qaab ah, iyo fiilooyinka muuqaalka badda. Makhaayada Palmilla iyo Admiral Nelson's Bar waxay caan ku yihiin cuntada iyo cabitaanka wanaagsan ee ay ku amaanan yihiin adeeg gaar ah oo aan caadi ahayn. U fiirsashada tafaasiisha shaqaalaha iyo maamulka si isku mid ah ayaa ku guuleystay abaal-marinaha warbaahinta caalamiga ah iyo abaal-marinaha hay’adaha caanka ah sida Conde Nast Traveler, Conde Nast Johansens. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo Victoria-house.com.